रास्कोटद्वारा ५० लाखको विपद कोष स्थापना « Lokpath
२०७६, १९ चैत्र बुधबार १८:३३
रास्कोटद्वारा ५० लाखको विपद कोष स्थापना
प्रकाशित मिति : २०७६, १९ चैत्र बुधबार १८:३३
मान्म । कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट उच्च सतर्कता, सावधानी र पूर्वतयारीका लागि ५० लाखको विपद् कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार नगरस्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिको पहलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नगर भित्रिने सम्पूर्ण नाकामा आवतजावत बन्द गर्नाका साथै नाकामा जाँच र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाँचचौकी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अत्यावश्यक कामकारबाही र वडा कार्यालयले गर्ने दैनिक काम सञ्चालनका लागि नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मूल समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ ।
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ ले वडामा रहेका अतिविपन्न तथा एकल महिलालाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । लकडाउनका कारणले अतिविपन्न तथा एकल महिलालाई छाक टार्न समस्या नहोस् भनेर पहिलो चरणमा चामल एक कट्टा, साबुन, मास्क र तेल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष भरतबहादुर बिकले बताए ।
सरकारले ७ प्रदेशका लागि छुट्यायो ९९ अर्ब ८७ करोड, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
उद्योग र उद्योगीको आशा पूरा नभएको गुनासो
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटप्रति
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने भएको
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि छ अर्ब ६० करोड